တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသား ပွနျလညျသငျ့မွတျရေးဆိုငျရာ ဂပြနျအစိုးရ၏ အထူးကိုယျစားလှယျနှငျ့ ဂပြနျနိုငျငံ၊ နိပှနျ ဖောငျဒေးရှငျးဥက်ကဋ်ဌ ဦးဆောငျသောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေးဆိုငျရာ ဂပြနျအစိုးရ၏ အထူးကိုယျစားလှယျနှငျ့ ဂပြနျနိုငျငံ၊ နိပှနျ ဖောငျဒေးရှငျးဥက်ကဋ်ဌဖွဈသူ H.E.Mr. Yohei SASAKAWA ဦးဆောငျသောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမ ဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ရဲဝငျးဦးနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေးဆိုငျရာ ဂပြနျအစိုးရ၏ အထူးကိုယျစားလှယျနှငျ့ ဂပြနျနိုငျငံ၊ နိပှနျဖောငျဒေးရှငျးဥက်ကဋ်ဌဖွဈသူ H.E.Mr. Yohei SASAKAWA ဦးဆောငျသောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့နှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E.Mr. Ichiro MARUYAMA နှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့ တှဆေုံ့ရာတှငျ COVID-19ရောဂါ ကူးစကျဖွဈပှားမှုအခွအေနမြေားနှငျ့ တပျမတျောအနဖွေငျ့ COVID-19ရောဂါ ကာကှယျကုသထိနျးခြုပျရေးလုပျငနျးမြားတှငျ အငျတိုကျအားတိုကျပါဝငျဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး တိုငျးရငျးသားဒသေမြားအပါအဝငျ အခွားလိုအပျခကျြရှိသညျ့ နရောဒသေမြားနှငျ့ အဖှဲ့အစညျးမြားသို့ ရောဂါကာကှယျကုသ ထိနျးခြုပျရေးအထောကျအကူပွုပစ်စညျးမြားကို တပျမတျောသားမြား၊ အရပျသား အစား ခနျ့ဝနျထမျးမြား၏ တဈရကျစာလုပျခလစာငှကေို ၂ လနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၏ လုပျခလစာငှမှေ ၂၅ ရာခိုငျနှုနျးကို တဈနှဈစာ လှူဒါနျးထားရှိသညျ့ ငှမြေားဖွငျ့ ကူညီ ထောကျပံ့ပေးလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ထို့ပွငျ COVID-19ရောဂါ ဖွဈပှားနေ သညျ့ကာလအတှငျး စားရေးအခကျအခဲဖွဈပျေါလကျြရှိသညျ့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အတှငျးရှိမွို့နယျမြားတှငျ ဆနျ၊ ဆီ၊ ပဲ အစရှိသညျ့ ရိက်ခာပစ်စညျးမြားကို ကူညီထောကျ ပံ့ပေးလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီအထှထှေရှေေး ကောကျပှဲသို့ ဂပြနျနိုငျငံမှ လလေ့ာသူအဖွဈလာရောကျသညျကို ဝမျးမွောကျစှာကွိုဆိုပွီး အောငျမွငျစှာကငျြးပပွုလုပျပွီးစီးနိုငျရေး၊ လှတျလပျ၍ တရားမြှတသညျ့ ရှေးကောကျပှဲ ဖွဈစရေေးနှငျ့ လှတျလပျစှာမဲပေးနိုငျရေး တပျမတျောမှ ကူညီဆောငျရှကျပေးလကျြရှိ သညျ့ အခွအေနမြေား၊ ရှေးကောကျပှဲအောငျမွငျစှာကငျြးပပွုလုပျနိုငျရေးအတှကျ ဂပြနျနိုငျငံ၏ ကူညီဆောငျရှကျပေးမှုမြားကို ကြေးဇူးတငျရှိပွီး ရှေးကောကျပှဲနှငျ့ COVID-19 ရောဂါဖွဈပှားမှု ကာလအလှနျတို့တှငျလညျး လူမှုစီးပှားဘ၀ထူထောငျမှုမြားနှငျ့ စိုကျပြိုး၊ မှေးမွူရေးကဏ်ဍမြားတှငျ လိုအပျသညျ့နညျးပညာမြားကို ဂပြနျနိုငျငံမှ ကူညီ ပေးနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ ပွညျတှငျးလကျနကျကိုငျပဋိပက်ခမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ တပျမတျောအနဖွေငျ့ NCAလမျးကွောငျးပျေါတှငျ ခိုငျခိုငျမာမာ ရပျတညျဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး ထာဝရငွိမျးခမျြး ရေးအတှကျ တပျမတျောအနဖွေငျ့ နိုငျငံတကာစံနှုနျးအတိုငျး နိုငျငံတျောမှ အကွမျးဖကျဟု သတျမှတျကွညောထားသော အကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားရှိသညျ့ နရောမြားမှအပ ကနျြ နယျမွမြေားတှငျ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲပေးထားသညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ နှဈနိုငျငံ ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားအား တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနေ မြားကို ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာအပွနျအလှနျ ဆှေးနှေးခဲ့သညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ ဂျပန်အစိုးရ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိပွန် ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ – ၆
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ ဂျပန်အစိုးရ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိပွန် ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ H.E.Mr. Yohei SASAKAWA ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲဝင်းဦးနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ ဂျပန်အစိုးရ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ H.E.Mr. Yohei SASAKAWA ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Ichiro MARUYAMA နှင့် အဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် COVID-19ရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေများနှင့် တပ်မတော်အနေဖြင့် COVID-19ရောဂါ ကာကွယ်ကုသထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး တိုင်းရင်းသားဒေသများအပါအဝင် အခြားလိုအပ်ချက်ရှိသည့် နေရာဒေသများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ ရောဂါကာကွယ်ကုသ ထိန်းချုပ်ရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို တပ်မတော်သားများ၊ အရပ်သား အစား ခန့်ဝန်ထမ်းများ၏ တစ်ရက်စာလုပ်ခလစာငွေကို ၂ လနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၏ လုပ်ခလစာငွေမှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို တစ်နှစ်စာ လှူဒါန်းထားရှိသည့် ငွေများဖြင့် ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ထို့ပြင် COVID-19ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေ သည့်ကာလအတွင်း စားရေးအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိမြို့နယ်များတွင် ဆန်၊ ဆီ၊ ပဲ အစရှိသည့် ရိက္ခာပစ္စည်းများကို ကူညီထောက် ပံ့ပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲသို့ ဂျပန်နိုင်ငံမှ လေ့လာသူအဖြစ်လာရောက်သည်ကို ဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုပြီး အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစီးနိုင်ရေး၊ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စေရေးနှင့် လွတ်လပ်စွာမဲပေးနိုင်ရေး တပ်မတော်မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ သည့် အခြေအနေများ၊ ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုများကို ကျေးဇူးတင်ရှိပြီး ရွေးကောက်ပွဲနှင့် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ကာလအလွန်တို့တွင်လည်း လူမှုစီးပွားဘ၀ထူထောင်မှုများနှင့် စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးကဏ္ဍများတွင် လိုအပ်သည့်နည်းပညာများကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကူညီ ပေးနိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော်အနေဖြင့် NCAလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ထာဝရငြိမ်းချမ်း ရေးအတွက် တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းအတိုင်း နိုင်ငံတော်မှ အကြမ်းဖက်ဟု သတ်မှတ်ကြေညာထားသော အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများရှိသည့် နေရာများမှအပ ကျန် နယ်မြေများတွင် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲပေးထားသည့် အခြေအနေများနှင့် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအား တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေ များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဗုဒ်ဓဘာသာကလြာဏယုဝအသငျးကွီး (YMBA) ၏ ရာသကျပနျဂုဏျထူးဆောငျ နာယကတပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျအား (YMBA) ၏ အမွငျ့ဆုံးဘှဲ့တျောဖွဈသညျ့ “အဂ်ဂမဟာမင်ျဂလဓမ်မဇောတိကဓဇဘှဲ့တျော”ဂုဏျပွုခြီးမွှငျ့(ရုပျသံသတငျး)
ဖဖေျောဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀ Admin 0
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဗုဒ်ဓဘာသာကလြာဏယုဝအသငျးခြုပျ (YMBA) ၏ အသငျးခြုပျဉက်ကဋ်ဌ ဦးရဲထှနျးနှငျ့အလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့မြားအား တှဆေုံ့ခွငျး(ရုပျသံသတငျး)